छोराछोरी समेत भैसकेकि श्रीमति जेल परेको सुन्दा श्रीमान खुसि हुदै खोले यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > छोराछोरी समेत भैसकेकि श्रीमति जेल परेको सुन्दा श्रीमान खुसि हुदै खोले यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित)
admin August 13, 2020 August 13, 2020 भिडियो, समाचार, समाज	0
एजेन्सी । कल्पनाका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा आएका छन् । कल्पना पनि आफ्नो दोस्रो श्रीमती भएको बताएका छन् । पहिलो श्रीमतीसंग बस्दै आएका कल्पनाका श्रीमानले आफुहरुको अहिले सम्म सम्बन्ध विच्छेद पनि नभएको र सम्बन्ध र सम्पर्क पनि नभएको बताएका छन् । आफुहरुको चार वर्ष यता कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । उनले छोरीको विवाहका विषयमा एक पटक मात्र फोनमा कुरा भएको बताएका छन् । आफुले छोरीको विवाह गरिदिन्छु भन्दा नमानेपछि आफ्नै तरिकाले गरिदिएको र आफु पनि नगएको बताएका छन् ।
उनले युटयुवमा घटनावारे जानकारी पाएको बताएका छन् । उनले कृष्णबहादुर वोहरालाई नचिनेको पनि बताएका छन् । उनले आफु काठमाडौ जाँदा कल्पनाको अरुसंग सम्बन्ध र सम्पर्क भएको थाहा पाएपछि आफुले कल्पनाको जिवन देखि निस्किएको बताएका छन् । उनले कल्पनावाट ३ छोराछोरी भएको बताएका छन् । उनले आफुसंगको सम्बन्ध विग्रिएका कारण कल्पनाले त्यस्तो गरेको होला भन्ने नसोचेको बताए । उनले भने, पहिला एउटा कुखुरा पनि काट्न नसक्ने मान्छेलाई कसरी मान्छे नै काट्ने आँट कसरी आयो ? म अचम्म परेको छु उनले भने ।
कल्पनाको माइती पक्ष र अरुले पनि छोराछोरीको भविष्यको बारेमा प्रश्न उठेपछि अब आफुले छोराछोरी ल्याउने बताएका छन् । विवाह गरेर गएकी छोरी पनि आफ्नो भाईलाई स्याहार सुसार गर्नु भनेर भन्नु आएको पनि बताएका छन् । विवाह गरेर गएपछि छोरी आएकै थिइनन्, तर आज छोरी पनि घर आएर भाईको रोएर बेहाल छ भाईलाई हेर्नुपर्यो भनेर गएको बताएका छन् । उनले आफ्ना छोराछोरीको जिम्मा आफुले लिने बताएका छन् । यसको भिडियो तल छ हेर्नुहोला
त्यस्तै काठमाडौंको गोंगबुमा आइतवार ह त्या भएका कृष्णबहादुर वोहोराको परिवारले घटनामा संलग्नलाई कडा स’जाय दिन माग गरेका छन् । कृष्णबहादुरको छोरी अहिले मिडियामा सार्वजनिक भएकी छन । कसैले उनको स्थायी घर रोल्पा भएको पनि बताइएको छ । रेखा बोहोरा उनको छोरी हुन् । उनी दागंको घोराहीमा बस्छिन् । कृष्णबहादुर बोहोरा रेखाको कान्छो अंकल हुन् । रेखाको अंकलसंग फागुनमा पछिल्लो पटक भेट भएको थियो । त्यसपछि उनीसंग तीन महिना यता फोनमा पनि कुराकानी पनि भएको थिएन ।
कृष्णबहादुरले आफु काठमाडौमा बस्ने र काम पनि गर्ने गरेको बताएका थिए । कृष्णबहादुरको श्रीमती भारतमा बस्ने र उनले त्यहाँ दाँतको अस्पतालमा काम गर्छिन । कृष्णबहादुरले आफ्नो छोरालाई पनि संगै लिएर गएको भन्ने बुझिएको छ । कृष्णबहादुर पहिलाको घर रोल्पा हो । पछि उनीहरु दागं झरेका थिए । दागंको हापुरमा कृष्णको घर हो । उनको जग्गा जमिन पनि हापुरमै छ । तर उनीहरु दागंमा धेरै बसेनन् । कृष्ण काठमाडौ कामका लागि गएको र उनको श्रीमती भारतमा गएका हुन् ।
उनले आफुले अनलाईन सपिगं सम्बन्धि काम गर्ने बताएका थिए । केही वर्ष अघि कृष्ण र उनको श्रीमतीबीच केही सम्बन्ध विग्रिएको थियो । तर पछिल्लो समय भने उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो भएको पनि बताए । उनले दुईवटा विवाह गरेका हुन् । जेठी श्रीमती मानसिक रुपमा विरामी भएका कारण उनले दोस्रो विवाह गरेका हुन् । जेठी श्रीमतीवाट दुई छोराछोरी र कान्छी श्रीमतीवाट एउटा छोरा छ । जेठी श्रीमतीवाट जन्मिएको एउटा छोरीको सानैमा निधन भएको छ ।
उनले सोमवार साँझ घटनाबारे जानकारी पाएको बताइन् । उनले आफ्नो बुवा नभएको र कृष्णबहादुरले नै आफुलाई बुवाको माया दिएको बताएकी छन् । कृष्णबहादुरले नै उनलाई पालेका थिए । पढाउने लेखाउने सबै कृष्णबहादुरले नै गरेका थिए । २ वर्षको उमेरमा आफ्नो बुवा तत्कालिन माओवादी द्ध न्द्धमा गुमाएकी थिइन् । त्यसपछि कृष्णबहादुरले नै छोरी सरह माया गरेर पालन पोषण गरेका छन् । उनले अहिले आफ्नो अंकललाई त्यस्तो बनाउनेलाई कडा कारवाही गर्न माग गरेकी छन् ।
कृष्णकि श्रीमति पहिलोपटक मिडियामा, ला’श उठाउन भारतबाट काठमाडौँ आइन् (भिडियो हेर्नुस्)
भर्खरै सडक किनारा बम विस्फोट, ६ सर्वसाधारणको मृत्यु